macOS 12 waxaa loogu yeeri karaa "Mamut" ama "Monterrey" | Waxaan ka socdaa mac
macOS 12 waxaa loogu yeeri karaa "Mamut" ama "Monterrey"
A MacOS Big Sur wax yar baa u hadhay in xilka laga wareejiyo. Tikniyoolajiyaddu waxay ku socotaa xawaare waali ah. Wixii maanta cusub maanta afar maalmood ayaa duugoobi doona. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay noocyada macOS. Xukunkiisu wuxuu soconayaa si sax ah hal sano.
Toddobaadka soo socda ayaa bilaabmaya WWDC ee 2021, halkaas oo Apple ay ku soo bandhigi doonto nooca cusub ee macOS 12. Waxaana jira durbaba tilmaamo ku saabsan magaca ay siin doonaan uunka. noqon kara "bareejeeyo»Ama«Monterrey«. Aan aragno sababta labadan naanays loo yaqaan.
Sannad kasta Apple waxay soo bandhigtaa cusbooneysiinteeda cusub ee macOS, marka laga reebo inay iyadu isku aqoonsato nambarka nooca (ku xigta waxay noqon doontaa 12), shirkaddu sidoo kale waxay "ku baabtiisaa" magaca summada. Waxaa la yaab leh, tani waxay ku dhacdaa oo keliya software-ka Macs.
Laga soo bilaabo 2013, Noocyada 'macOS' waxaa lagu magacaabaa meelo caan ka ah California. Ilaa hadda, waxaan soo marnay: Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, iyo Big Sur. Waxaanan leenahay tilmaamo sida tan xigta loogu yeeri karo. Intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay, Apple waxay cusbooneysiisay oo ay ka tagtay magacyo ganacsi oo qaarkood noo tilmaami kara waxa loo yaqaan 'macOS 12'.
Apple waxay iska diiwaangalisay dhowr magac qiyaastii 2013 iyo 2014 iyada oo loo marayo shirkadaha "hore" markay bilaabeen adeegsiga goobaha California macOS. Yosemite, Sierra, El Capitan, iyo Big Sur ayaa lagu soo daray isla qaybtaas ganacsi. Magacyada sida "Diablo", "Condor", "Tiburon", "Farallon", "Miramar", "Rincón", "Pacific", "Secuoya", "Shasta", "Grizzly", "Skyline" iyo "Redtail" sidoo kale ayaa lagu daray, laakiin diiwaangelintooda ganacsi sida muuqata Apple ma cusboonaysiin.
"Mammoth" iyo "Monterey" waxaa ganacsi ahaan diiwaangeliyey shirkadda Apple
Jasiiradda Monterey ama Mamut Ski Resort waxay noqon kartaa magaca xiga ee macOS 12.
Laakiin si xiiso leh, Apple ayaa cusbooneysiisay laba ka mid ah magacyadaas ganacsi si loogu isticmaalo magaca nidaamka kombiyuutarka. Labadan magac waa "Mamut" iyo "Monterrey" (asal ahaan, "Mammoth»Iyo«Monterey").
"Mammoth" waxaa hadda cusbooneysiiyay shirkadda Apple 29-kii Abriil ee sannadkan. Waa magaca ugu casrisan ee ku jira galka shirkadda Apple. Sida la filayo Cupertinos ayaa u doortay inuu matalo Mammoth Lakes, California. Harada Mammoth waa a dalxiis oo ku dhow haro qurux badan oo ku taal Sierra Mountains, oo aan ka fogayn Yosemite. Xaqiiqdii in kabadan hal maareeye shirkadeed badanaa barafka halkaas.
Magaca kale ee suurtogalka ah, «Monterey», ayaa la cusbooneysiiyay Diseembar 29, 2020. Marka laga reebo inuu yahay magaca magaalo, sidoo kale waa magaca jasiiradda, halka koonfurta ka xigta, xeebta «Big Sur» . Marka waxay u ekaan kartaa sidaas macOS Monterey noqon lahaa kordhinta ah MacOS Big Sur. Isniinta waxaan ka tagi doonaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » macOS 12 waxaa loogu yeeri karaa "Mamut" ama "Monterrey"
Cryptocurrencies waxay imanayaan Apple Pay oo ay la socoto Coinbase